केपी ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घनश्याम भुषालको घोषणा ! - Nepalese Times
खानेपानी कार्यालयका हाकिमलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले नाङ्गेझार पारेर यसरी गाउँ घुमाए, कारण यस्तो ! 32 मिनेट अघि
एकाबिहानै दुःखद् खबरः बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या ८८ पुग्यो, कहाँ कती ? (विवरणसहित) 8 घण्टा अघि
केपी ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घनश्याम भुषालको घोषणा !
नेप्लिज संवाददाता २५ आश्विन २०७८, सोमबार ०६:३५ (1 हप्ता अघि) २२१ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का उपमहासचिव घनश्याम भुसालले अगामी १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । विधान महाधिवेशनबाट एमालेका पदाधिकारीसहित कमिटीहरूको संख्या र आकार निर्धारण भइरहेको छ । सम्पन्न विधान महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको छ ।
आउँदो महाधिवेशनबाट पनि पार्टी अध्यक्षमा ओलीलाई नै निरन्तरता पाउने संकेत उनले गरेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै एमालेले नेतृत्व गरेको त्यो ध्रुवलाई सुदृढ बनाउन आगामी महाधिवेशनमा पनि ओलीलाई नै पार्टीको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने संकेत उनले गरे । राजधानी दैनिकबाट
नेपाली कांग्रेस किन कमजोर बन्दै गयो ? नेता प्रकाशमान सिंहले खुलाए यस्ताे तथ्य